မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: မဲပေးကြပါအုံးရှင်...
Posted by mabaydar at 2:53 PM
မဗေဒါရေ vote လုပ်လိုက်တယ်း)
6/08/2011 2:57 PM
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်... အားကိုးပါတယ်...
6/08/2011 3:06 PM
Good Luck my friend.2vote from me.
6/08/2011 5:38 PM
3 votes from me and share in fb
6/09/2011 3:29 AM
2 votes from me and share in fb to get many votes from my other friends in fact i don´t have many friends:( http.facebook.com.seinnliong.
6/09/2011 5:33 AM
voted ... 169 :)
6/10/2011 1:07 AM
6/10/2011 11:15 PM
3 Votes from me :) and looking forward your new post too :)
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်... ခုလို ကျွန်မကို ကူညီကြပြီး ခုထက်ထိလာရောက် လည်ပတ်ဖတ်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်... မဗေဒါ ပိုစတာလေးကတော့ ခုဆိုရင် သတ္တမမြောက်နေရာလေးမှာပါ... တချို့လူတွေက အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ လိမ်ပြီး မဲပေးနေကြတယ်ဆိုတာလဲ သိပါတယ်... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခုလိုမျိုး မဗေဒါကို ကူညီကြတဲ့ ခင်မင်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ မဗေဒါကတော့ ဒီပြိုင်ပွဲ ဆုမရရင်တောင် ကျေနပ်ဝမ်းသာနေမှာပါ...
voted! ပထမဆုံးပုံလေး လှလိုက်တာ.. ကျန်တဲ့၂ပုံလဲ ချစ်စရာလေး :)